Uyidibanisa njani iThebhulethi yakho ye-Android kwiKhompyuter nge-Samsung Kies
Indlela ye-Samsung yokudibanisa ifowuni yakho okanye ithebhulethi ye-Android kwikhompyuter kukusebenzisa into ebizwa ngokuba yi-Samsung Kies. Ungazikhathazi ngokubuza: Akukho mntu kwiplanethi onolwazi lokuba iKies imele ntoni, makungabikho ndlela yokuyibiza ngayo.
Ithebhulethi ye-Samsung isebenzisa iiKies kwenye yeendlela ezimbini zokunxibelelana nekhompyuter kunye nokutshintsha iifayile. Eyona ndlela ilungileyo yi-Kies Air app, edibanisa ngaphandle kwefowuni ithebhulethi yakho kwikhompyuter xa zombini izixhobo zikunethiwekhi enye ye-Wi-Fi.
Xa i-app yeKies Air ingafumaneki, kufuneka ukhuphele ikopi ye Khetha inkqubo yePC yakho okanye iMacintosh.
Qinisekisa ukuba ukhuphele uguqulelo olufanelekileyo lweeKies kwithebhulethi yakho ye-Samsung.
Xa sele iqalile, i-Kies ikuvumela ukuba wenze isipele kwaye utshintshe iifayile phakathi kwethebhulethi yakho ye-Samsung kunye nekhompyuter. I-Kies Air isebenzisa isikhangeli sewebhu sekhompyuter yakho ukutshintsha kunye nokuthumela iifayile; Inkqubo ye-Kies isebenza njengesixhobo sayo sokuvumelanisa iifayile.
Xa usebenzisa i-Kies Air, landela umkhombandlela kwiscreen sethebhulethi ukumisela isikhangeli sewebhu sekhompyuter yakho.
Ukuphelisa uqhagamshelo lweKies Air, chukumisa iqhosha lokuma kwiscreen sethebhulethi. Emva koko unokuvala iwindow kwisikhangeli sakho.
Sukucofa iqhosha eliBuyayo kwisikhangeli sewebhu sekhompyuter yakho xa usebenzisa iwebhusayithi yeKies Air. Sebenzisa nje ulawulo kwiphepha lewebhu uqobo ukuhamba.
Ukukhuphela iifayile kwithebhulethi esuka kwikhompyuter usebenzisa inkqubo yeKies (hayi iKies Air), sebenzisa imenyu yeFayile. Khetha iFayile➪Yongeza ifayile kwiGalaxy Note 3➪Internal (okanye ngaphandle), uze ukhethe ifayile oza kuyithumela.
Ukusebenzisa iiKies akukuthinteli ekugqithiseni iifayile usebenzisa ezinye iindlela. Inyaniso:
Ukuba awuyithandi i-Kies, ungayisebenzisi. Nangona kunjalo:
IiKies ziyafuneka ukuze kufakelwe uhlaziyo kwezinye iipilisi zeSamsung. Nokuba ithebhulethi ikwazisa ngohlaziyo, kwaye uzama ukufaka uhlaziyo ngokuthobela izikhombisi zethebhulethi, uhlaziyo lusenokungaphumeleli. Uyaziswa ukuba kufuneka usebenzise iiKies ukugqibezela uhlaziyo.
Ipepto bismol ngelixa uncancisa
ulwelo oluneziphumo ebezingalindelekanga
I-panacur yenani lezinja
ukujikeleza okunamandla kunye nee-engile ezilungileyo
ziphela nini iziphumo ebezingalindelekanga ze-prednisone